Ardizia (Ardisia): ịgha mkpụrụ na ilekọta ụlọ ifuru - Mkpụrụ ubi - 2019
Ardizia (Ardisia): ịgha mkpụrụ na ilekọta ụlọ ifuru
Ardiziya ya tomato dịtụ reminiscent nke viburnum, ọ bụ ezie na n'ezie ha bụ nke kpamkpam ezinụlọ dị iche iche. Kedu ụdị osisi bụ nke a? Otu esi eto eto na ulo, onye ala nna ya bụ ebe dị anya nke Asia, nakwa: otu esi elekọta ya na ịgwọ ọrịa nke ọrịa ma ọ bụ pests - gụọ ya.
Na-eto mkpụrụ site ná mkpụrụ n'ụlọ
Nkwadebe ala na fertilizing
Video: Atụmatụ maka ilekọta osisi Ardizia
Ardizia na-akpọkwa ardisia. Nke a bụ ụdị mkpụrụ osisi nke ebe obibi ezinụlọ Mirsin nke primrose, bụ osisi na-acha ọkụ ọkụ. Na ọdịdị, Ardizia nwere ike ịmalite elu ruo 60-150 cm, ma na-eto na windill na-abụkarị ihe karịrị 80 cm. Akwụkwọ ndị ahụ adịghị mma, ọzọ, kenkuwa, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Osisi dị iche iche - ọcha, ọbara ọbara, pink. Ha bụ obere, na-etolite corymbose ma ọ bụ paniculate inflorescence, nke na-etolite na leaf axils ma ọ bụ n'elu nke Ome. Ná ngwụsị nke oge okooko osisi, obere coral-acha ọbara ọbara na-egosi na ha nwere ike ịnọ na osisi ihe dịka ọnwa isii, ma mgbe ụfọdụ ruo otu afọ.
Ka anyị tụlee akụkụ bụ isi nke osisi na-eto eto n'ụlọ.
Mụta otú e si eto eto dị ka: juniper, lavender, rosemary, nri, fern Asplenium, ụlọ thuja, kọfị, azalea, kalanchoe, anthurium, geranium, orchid, spathiphyllum, violet, begonia n'ụlọ.
Ardiziya hụrụ ìhè nke ukwuu. Ma ịhọrọ ebe ọ ga - anọ, ọ ka mma ịhapụ ebe ndị ahụ nwere ike igosi anyanwụ ozugbo. Nhọrọ dị mma dị na windo, nke chere ihu n'ebe ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ. N'oge okpomọkụ, Ardizia hụrụ okpomọkụ nke +22 ... +24 Celsius, na oyi - site na +15 ruo +17 Celsius.
Ọ dị mkpa! Osisi enweghị ike ịnagide drafts, n'ihi ya, ọ ka mma ịkọ osisi na windo ma ọ bụ akwarium.
N'oge ọkọchị, a na-adụ ọdụ ka ikuku ikuku na mbara igwe (mbara ihu, ubi, ubi), ma jide n'aka na itinye ya na ndò nke osisi, ire ọkụ ndị ọzọ ga-ebute akwụkwọ.
Ala Alaia adịghị mma na ala, ọ na-etolite n'ọkụ na ala dị arọ. Na acidity nke ụwa nwere ike ịba na subacidic na obere alkaline. Isi ihe - ime ihe dị mma.
Na-azụ shrub site na mmiri ruo ụbịa kwa izu abụọ. Ọ na-enwe mmasị na mgbagwoju ụwa nile nke nri fatịlaịza, bụ nke a na-eji maka ụlọ ime ụlọ.
Dị ka ihe ejiji n'elu na-ejikwa: "Chunky", nitroammofosku, "Kemira", "Ammophos", biohumus.
Ọ dị mkpa ịgha mkpụrụ na March. Mkpụrụ ọka Ardizii nwere ike zụrụ n'ụlọ ahịa ahụ, ma ekwesịrị ịsị na ha na-anwụ ngwa ngwa, yabụ nhọrọ kachasị mma ga-abụ ịchọta mkpụrụ tomato chara acha nke osisi ahụ. Họrọ nnukwu mkpụrụ osisi chara acha, wepụ mkpụrụ sitere na pulp wee mee ka ha dịkwuo nro dị nro 1 cm. Kpochie ite ahụ na iko ma ọ bụ ihe nkiri. Nọgide na-enwe okpomọkụ nke ala +20 Celsius C.
Na-eto eto ma na-agbasa n'ime mmiri na ala maka osisi ime ụlọ. Ha ga-adị ka bushes naanị n'afọ 2-3.
Ị ma? N'akụkụ nke epupụta Ardizia na-ebi ndụ "nje" dị mma - Bacillusfolicola, ha na-emepụta ihe ndị dị mkpa maka ibu osisi.
Ị nwere ike ime usoro ịzụlite site na mmalite oge opupu ihe ubi ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ. Mkpụrụ n'elu nke ị ga na ikike. Debe ha n'ime ụlọ dị ọkụ nke nwere okpomọkụ nke + 25 ... +27 ° C. Akuku ndị a agaghị agbanye mgbọrọgwụ ozugbo, ọ ga-adị mkpa ichere ntakịrị. Ọ dịghị mkpa ịkụnye ha, ebe ọ bụ na alaka ha dị mma.
Osisi shrub chọrọ elu iru mmiri. Iji bulie ya, tinye ite na pallet na ụrọ gbasaa, ma ọ bụ fesa pallet na pebbles mmiri.
Ardizii kwesiri igba ozo na-adighi ala ma o na-emegharia kwa afo. Jide n'aka na ala anaghị akpọnwụ, mana mmiri dị na ya ekwesịghị ịdịgide.
Ọ dị mkpa! Nnukwu ịgbara mmiri na oke mmiri mmiri nwere ike ime ka akwukwo daa.
Ndị isi nri nke Ardizia bụ aphid na coccides (isi na ikpuru). Ọ bụghị nanị na ha na-amanye sap ahụ site na osisi ahụ, ma na-edebekwa ihe nzuzo ndị na-akpalite ọdịdị nke ebu. Ị nwere ike wepu ha na soda na-etinye mmanya na-aba n'anya, mgbe e mesịrị, a ga-ejikwa ụmụ ahụhụ na-agwọ ụmụ ahụhụ site na ụmụ ahụhụ na-aṅụ aṅụ ("Aktellik", "Bankol").
Gụọkwa otu esi tufuo shchitovki, irighiri na chlorosis n'ụlọ
Ardiziya nwekwara ike inweta ọrịa na ọrịa na-efe efe, n'etiti ha bụ chlorosis kachasị. Iji gbochie ọrịa a, a na-enye shrub nri na fatịlaịza nwere ígwè, dịka ọmụmaatụ chelate ígwè.
Ị ma? Otu n'ime ụdị ardizii, ya bụ ndị Japan ardiziya, bụ otu n'ime mkpịsị akwụkwọ 50 na nkà mmụta ọdịnala nke China.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịkụ osisi a mara mma, ọ ga-atọ gị ụtọ n'ọdịdị ya ruo ọtụtụ afọ. Isi ihe - iji lekọta ya anya. Ọzọkwa, ikuku airdism na-eweta ọ bụghị nanị obi ụtọ na-atọ ụtọ, kamakwa uru ndị bara uru, n'ihi na ọ na-eme ka microclimate dị n'ime ụlọ dị mma. Nwee akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ a na windillill gị ma hụ n'oge na-adịghị anya.
"Osisi okooko osisi Ardizia na-apụta site na July ma mee ngwa ngwa ghọọ tomato, ma nke nta nke nta ghọọ nke coral-acha uhie uhie ma ọ bụ odo odo-acha uhie uhie na n'ihi na ha na-adịru ọtụtụ ọnwa, ha bụ ihe ịchọ mma nke osisi a. mgbe mkpụrụ osisi na okooko osisi nwere ike ịhụ na otu osisi .Ọ bụrụ na ị na-akụ mkpụrụ osisi dị na ala, osisi ọhụrụ na-eto site n'aka ha. Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị bụ eziokwu ahụ na nje bacteria na-eto eto n'akụkụ ọnụ nke epupụta ahụ, nke na-enweghị ike ịdị adị. Ya mere, ha agaghị ewepụ ha! N'ime afọ dum, osisi a na-achọ ka egbukepụ egbukepụ, ma na-enwu site na ìhè anyanwụ kpọmkwem, ebe. Emela ka ogige ahụ bụrụ ihe ọ bụla, ma ọ bụghị mkpụrụ osisi ahụ agaghị ekekọta ya. Mkpụrụ osisi ga-adịkwu ma ọ bụrụ na ị nyefee pollen site na otu ifuru na pistil nke ọzọ nke nwere brush: okpomọkụ kachasị mma n'oge oyi bụ 12-15 ogo. N'okwu dị ọkụ, mkpụrụ osisi na-ada ngwa ngwa, ha na-agbakwa ngwa ngwa na ikuku. N'oge opupu ihe ubi i nwere ike igbutu prisdzii. Osisi germinate na 22 ogo. "
Ịgbara dị mma, ndụ na-enweghị ihe ọ bụla na-asọ oyi (nanị ihe na-eguzo na pallet na ụrọ na-agbapụta mmiri) bụ ihe niile. Amaghị m ihe m ga-eme na tomato. Ha na-ede na na ọnọdụ ebe ọ bụ na ọ bụghị ọtụtụ n'ime ha. M na - agbalị iji polls mebie - ka anyị hụ ihe mere.
Nkọwa nke ụdị dị iche iche na ihe nzuzo nke na-eto eto - udara tomato Cherry uhie
Ụdị osisi na-acha mgbegreen
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ardizia (Ardisia): ịgha mkpụrụ na ilekọta ụlọ ifuru